Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Nndzi Awoda? | FAQ
KENKAN WƆ Abkhaz Afrikaans Albanian America Mmum Kasa Amharic Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Azerbaijani Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bicol Bosnian Boulou Brazil Mmum Kasa Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Colombia Mmum Kasa Corsican Croatian Czech Dangme Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finnish Fon French Ga (Nkran Kasa) Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Hungary Mmum Kasa Iban Ibanag Igbo Iloko Indonesian Irish Mmum Kasa Isoko Italian Japan Mmum Kasa Japanese Javanese Kabiye Kabyle Kachin Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Lomwe Low German Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mfantse Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngabere Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Persian Peru Mmum Kasa Philippines Mmum Kasa Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Cuzco) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Somali Spanish Spanish Mmum Kasa Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tongan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba (Alata) Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Jehovah Adasefo nndzi awoda osiandɛ yɛgye dzi dɛ dɛm afedzi ahorow a ɔtsetse dɛm no nnsɔ Nyankopɔn enyi. Ɔwɔ mu dɛ Bible no nnkasa nntsia awodadzi tsenn dze, naaso ɔboa hɛn ma yesusũ ndzɛmba etsitsir bi a ɔfa dɛm afedzi ahorow yi ho yie. Afei so Bible no boa hɛn ma yɛtse Nyankopɔn adwen a ɔwɔ wɔ awodadzi ho no ase. Susũ nsɛm etsitsir a ɔfa awodadzi ho no mu anan bi ho hwɛ, na hwɛ Bible ngyinadosɛm ahorow bi a ɔfa ho.
Awodadzi fi abosonsom mu. Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend nwoma no kã dɛ, awodadzi fi gyedzi a ɔnye dɛ sɛ odu obi n’awoda a, “esunsum fĩ nye tum ahorow bi nya hokwan dɛ wobepira nyia woridzi n’awoda no.” Ntsi wɔgye dzi dɛ, “aber a n’anyɛnkofo ehyia mu na wɔma no tsinkwa no, iyi bɔ nyia woridzi n’awoda no ho ban.” The Lore of Birthdays buukuu no so kã dɛ, wɔ tsetseberdo no, nna awoda ho kyerɛwtohɔ ho “hia na ama woeetum akã obi ne daakye,” aber a worigyina “nworaba mu hwɛ do” ayɛ iyi no. Buukuu yi dze kã ho dɛ, “nna tsetsefo no gye dzi dɛ awodadzi kyɛndar ahorow no wɔ bayi soronko bi a wɔdze ma obi tsinkwa.”
Naaso, Bible no kasa tsia abayidze, mbusunkɔnhyɛ, abayisɛm, anaa “dza ɔtsetse dɛm.” (Deuteronomy 18:14; Galatiafo 5:19-21) Nokwasɛm nye dɛ, siantsir kor a ɔmaa Nyankopɔn sɛɛe tsetse Babylon kurow no nye dɛ, nna no mufo no dze hɔnho hyɛ nworabahwɛ a no so yɛ mbusunkɔnhyɛ no mu. (Isaiah 47:11-15) Jehovah Adasefo nnhaw hɔnho nnhwehwɛ beebi a amandze biara fi; naaso sɛ Kyerɛwnsɛm no dze amandze bi ho akwankyerɛ bi a no mu da hɔ ma a, yemmbu hɛn enyi nngu do.
Christianfo a nna wodzi kan no enndzi awoda. The World Book Encyclopaedia no kã dɛ, “nna wobu obiara n’awoda a wodzi no dɛ ɔyɛ abosonsom amandze.” Bible no da no edzi dɛ asomafo no nye afofor a Jesus nankasa kyerɛkyerɛɛ hɔn no yɛɛ nhwɛdo bi a ɔsɛ dɛ Christianfo nyinara dzi ekyir.​—2 Thessalonicafo 3:6.
Afedzi kor pɛr a ɔsɛ dɛ Christianfo dzi no fa owu ho, na nnyɛ awoda ho​—Jesus no wu no. (Luke 22:17-20) Ɔnnsɛ dɛ iyi yɛ hɛn nwanwa osiandɛ Bible no kã dɛ, “owu da sen obi n’awoda.” (Ɔsɛnkafo 7:1) Obodur Jesus no wu da no, nna oenya dzin pa wɔ Nyankopɔn enyim, na iyi ma no wu da no ho hia sen n’awoda.​—Hebrewfo 1:4.
Bible no nnkã Nyankopɔn no somfo biara ho asɛm dɛ odzii awoda da. Nnyɛ dɛ bi a pue na iyi ho asɛm emmpue wɔ Bible no mu kɛkɛ, osiandɛ Bible no kã binom a wɔannsom Nyankopɔn naaso wodzii awoda ho asɛm. Wɔ ɔno mpo mu no, ɔannkã asɛmpa ammfa no mu biara ho.​—Genesis 40:20-22; Mark 6:21-29.
Aso Jehovah Adasefo mba tse nkã dɛ wɔdze adze pa bi akam hɔn osian hɔn awoda a wonndzi ntsi anaa?
Tse dɛ awofo pa biara no, Jehovah Adasefo so da ɔdɔ edzi kyerɛ hɔn mba wɔ afe mũ no nyinara mu. Dza wɔyɛ no bi nye dɛ wɔkyɛ hɔn adze na wɔnye hɔn bɔ mu gye hɔn enyi wɔ afe mũ no nyinara mu. Wɔbɔ mbɔdzen dɛ wobedzi Nyankopɔn a ofi ne pɛ mu dze ndzɛmba pa ma ne mba no ne nhwɛdo pa no ekyir. (Matthew 7:11) Nsɛm a odzidzi do yi kyerɛ dɛ Adasefo mba nntse nnkã dɛ wɔdze biribi rekam hɔn:
“Sɛ wo nsa ka akyɛdze bi aber a w’enyi nnda a, ɔno na ɔyɛ dɛw no.”​—Tammy, oedzi mfe 12.
“Ɔwɔ mu dɛ minnya akyɛdze wɔ m’awoda dze, naaso m’awofo ma me akyɛdze wɔ mber afofor. Na mepɛ no dɛm so, osiandɛ ɔyɛ a m’enyi nnda.”​—Gregory, oedzi mfe 11.
“Edwen dɛ ndwom nye keeki kakra a wodzi no minitsi du ntamu no na ɔyɛ apontow? Eba me fie a, nna ibohu apontow papa!”​—Eric, oedzi mfe 6.
Fa mona Fa mona Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Nndzi Awoda?
Ebɛnadze Ntsi Na Jehovah Adasefo Nndzi Borɔnya?